Bara lehibe CNC machined tapany amin'ny iray andro avy any Protolabs | Dongtai
Baka lehibe CNC machined tapany amin'ny iray andro avy any Protolabs
Protolabs dia nanangana serivisy serivisy haingam-pandeha CNC haingana hampitodika ny ampahany aluminium mandritra ny 24 ora satria ny sehatry ny famokarana kosa mijery ny hivezivezy mba hahazoana mamatsy famatsiana. Ny serivisy vaovao dia hanohana ny mpanamboatra ihany koa hameno ny fangatahana miakatra rehefa manomboka ny fanarenana Covid-19.
Daniel Evans, injeniera amin'ny famokarana ao amin'ny Protolabs dia mitatitra fa mitaky ny fahaizana haingam-pandeha CNC haingana ho an'ny aluminium 6082 dia nitombo niaraka tamin'ny orinasa niasa hamolavola ny tenany manokana ary mila prototypes hanaporofoana haingana ireo fizarana ireo.
"Matetika ianao dia mampiasa io serivisy io ho an'ny prototyping na angamba ampahany kely ambany," hoy izy. "Amin'ny haingana ny tsena dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay, afaka manampy isika hanome ny mpanjifanay tena mifaninana. Hitanay fa ho avy aty aminay izy ireo satria azontsika atao ny manao milina azo atokisana ary alefa any amin'ny metaly metaly sy plastika lavitra kokoa noho ny mpamatsy hafa ny anjarany.
"Ity fahaiza-manao lehibe vaovao CNC ity ho an'ny aluminium 6082 dia manome ity serivisy fanamboarana sy fanamboarana haingana ity ho an'ny tetikasan'izy ireo - indrindra ho an'ny orinasa mitady vokatra."
Miaraka amin'ny fotoana fandefasana azo itokisana haingana be toy ny iray andro manomboka amin'ny fampidirana CAD voalohany, ny orinasa ankehitriny dia afaka mikolo-bato avy amin'ny bara hatramin'ny 559mm x 356mm x 95mm amin'ny milina CNC 3-axis. Raha oharina amin'ny serivisy fananganana hafa, ny Protolabs dia afaka mihazona ny fandeferana amin'ny +/- 0.1mm hamokatra faritra ho manjavozavo toa ny 0.5mm any amin'ireo faritra raha toa ny 1mm ny halalin'ny singa nominaliny.
Nanohy an-dRtoa Evans: "Nafarinay tamin'ny serivisy ny serivisy fanamboarana sy ny prototyping ary novolavolainay ny rafitra famolavolana sy ny rafitra fanamafisana. Na dia manana injeniera fampiharana aza izahay dia hifanerasera amin'ny mpanjifa hanoro azy ireo raha ilaina, ity dingana ity dia manafaingana ny fanaterana azy io. ”
Ny fikosoham-bary CNC dia azo alaina ao amin'ny orinasa ao amin'ny plastika vita amin'ny mari-pahaizana 30 sy ny metaly ao anaty habaka kely kokoa amin'ny alàlan'ny fametrahana roa-axes 3 sy axis misy indexing. Ny orinasa dia afaka manamboatra sy mandefa na inona na inona avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny faritra maherin'ny 200 ao anatin'ny iray na telo andro miasa.
Ny serivisy dia manomboka amin'ny mpanjifa mandefa famoronana CAD ao amin'ny rafitra ara-pivarotana automatique ho an'ny orinasa izay ny rindrambaiko tompondaka dia manadihady ny famolavolana azo atao. Mamokatra teny izany ary manasongadina ireo faritra mety mila famerenana famolavolana afaka fotoana vitsivitsy. Aorian'ny fankatoavana, ny CAD vita dia afaka manohy ny famokarana.
Ho fanampin'ny machining CNC, ny Protolabs dia manamboatra faritra mampiasa ny teknolojia teknolojia 3D fanontana indostrialy farany sy ny famolavolana tsindrona haingana ary afaka manonona ny fandefasana haingana ho an'ireo serivisy ireo ihany koa.